Author Topic: Su'aal: Macquul ma tahay in uu qofka ragga ah dheeraado 18 sano ka dib? (Read 15108 times)
« on: February 17, 2016, 10:28:27 AM »
asc waan idiinsalaamay dhamaan taqaatiirta somalidoc waxaan aad idiinkaaga mahad celinayaa howsha wacan oo aad shicibkiina u heysaa intaa kadib waxaan qabaa suaal aha SUURTA GAL MA TAHAY IN UU DHEERAADO QOFKA RAGGA AH OO 19 AMA 20 JIR AH IN LA EG 4-3 INCH HADEEY MACQUULTAHAY SIDEE WAADNA MAHADSAN TIHIIN WAXAAN RAJEYNAA INAAD JWB IGU SOO CELIN DOONTAAN INSHA ALAAH
Re: Su'aal: Macquul ma tahay in uu qofka ragga ah dheeraado 18 sano ka dib?
« Reply #1 on: February 19, 2016, 03:35:37 PM »
Inkastoo jirka si aayar ah uu soo deynayo hormoonka korriinka "growth hormone" laakiin waa suura gal in dhirirkaagu uu ku darsamo ugu badnaan ilaa 4 inch, badanaa 2 inch.
Sidee loo dheerayn karaa dhererkaaga markaa ka wayn tahay 18 sano?
Cun cunno protein leh oo kugu filan, khudaarta iyo fruutka.
Waa in aad jimicsi joogto ah sameysaa usbuucii labo ilala sadax jeer oo joogto ah.
Waa in aad heshaa hurdo kugu filan, maadaama hormoonka aan kor ku soo xusay la soo daayo markii la hurdo.
Iska ilaali waxyaabaha korriinka hoos u dhigo sida: sigaarka iyo khamriga oo si xaqiiqo ah loo arkay in korriinka dhirirka qofka ay saameeyaan.
Qaab fadhigaaga iyo socodkaaga sax, ha noqon dadka markay fadhiyaan horay u fooraarsado ama markay socdaan goobada isku yeelo, tan waxay keenaysaa in lafdhabartaadu ay qalloocato, kadibna dhirirkaaga uu yaraado.
Sameey jimicsiga iskala bixinta subaxii 15 daqiiqo, tan waxay dabcinaysaa murqaha lafdhabartaada, si korriinka dhirirkaagu uusan saameyn ugu yeelan.
Waa in aad qorax heshaa oo aad isku dhigtaa, haddii meesha aad ku nooshahay ay qoraxdu yar tahay, qoraxdu waxay kordhisaa korista lafaha iyadoo sare u qaado fitamiin D-ga, waxaa kaloo fitaminkaan ka heli kartaa caanaha, ukunta iyo kalluunka.
Akhriso fitamiinada kala duwan waxa ay jirta u taraan iyo cunnooyinka laga helo: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5781.0.html
Akhriso cunnooyinka kabo lafaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,6485.0.html
« Reply #2 on: February 22, 2016, 06:04:02 PM »
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin somali doc waxaana aad idinkaga mahad celinayaa sida wacan ee aad ii tix geliseen uga soo kwbteen codsigeyga jazaakumulaahu kheyr
Views: 2876 November 16, 2018, 01:43:21 PM
Views: 4880 October 26, 2016, 06:57:06 PM
Views: 12508 November 14, 2007, 12:08:44 AM
Views: 59263 December 11, 2017, 11:50:07 PM
Views: 16897 January 16, 2010, 06:58:41 PM